Kandidà Dama: “Amin’ny 7 novambra ihany ny fifidianana” | NewsMada
Kandidà Dama: “Amin’ny 7 novambra ihany ny fifidianana”
Tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana ny kandidà efa vonona. “Amin’ny 7 novambra ihany”, hoy ny kandidà Dama.
“Tamin’ny 30 jona, teny Antanimena, efa nambarako fa mety amiko io datim-pifidianana io. Tsy manemotra izany aho fa efa vonona hiatrika.” Io ny tenin’ny kandidà lah. 4, Rasolofondraosolo Zafimahaleo na i Dama, teny Analakely, omaly, manoloana ny fitakiana fanemorana ny fifidianana. Fanahy iniana ny filalaovana ny lalàmpanorenana sy ny lalàm-pifidianana ny amin’ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Repoblika na tsia. Mila mandeha mahitsy hatrany.
30 taona mahery, novidina hatrany ny safidim-bahoaka, fanambaniana ny maha olona sy ny maha Malagasy. Nefa mbola manana ny hasiny ny maro anisa tsy miteny, manaja ny marina, tia tanindrazana. Hamoha sy hamaha izany ny hetsika tolo-tanana. “Fotoana izao hanehoana fa mbola manana hambompo isika Malagasy, natao entam-barotra hatramin’izay”, hoy izy. Hararaotin’ny sasany amin’izany ny fahasahiranan’ny olona, ny tsy fahalalany, ny fahatahorany fanjakana…
Hoporofoina fa manan-katolotra isika, ary hanangana “Fondation” amin’ny tolo-tanana: tsy vola ihany fa mety ho fahaiza-manao, fanoloran-tena hiasa an-tsitrapo. Hifampitsinjovana izany, na voafidy izy na tsia. Amin’ny alalan’ny telefaonina, tranonkalam-pifandraisana, banky ny tolo-tanana. Mitohy ny valim-babena ary hangarahara, havoaka ny lisitry ny olona manome sy ny fandaniana.